Ho vahin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny onjampeo Alliance 92 FM, anio ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry. Anisan’ny hitondrany fanazavana ny fanomanana ny fifidianana. Eo koa ny fanombohan’ny fisoratana anarana amin’ny lisi-pifidianana. Ny momba ny lalàm-pifidianana. Arahintsika amin’ny 12 ora sy fahefany ny amin’ny fiteny malagasy ary amin’ny 1 ora sy fahefany kosa ny amin’ny fiteny frantsay.
Hifarana anio ny fitsidihan’ny filoha Rajaonarimampianina any Japon. Niompana amin’ny fiaraha-miasa ara-toekaren’ny firenena roa tonta ny fivahinianana any an-toerana. Teo ny fanatrehan’ny filoha sy ny delegasiona ny fihaonambe toekarena. « Madagascar Japan Business Forum ». Horaisin’ny amperora japoney Akihito ny tenany anio.
Anjaran’ny loholona indray ny mandray ireo mpikamban’ny governemanta. Hatao rahampitso etsy Anosikely ny fifanatrehana eo amin’ny roa tonta. Anisan’ny hitondran’ireo loholona fanontaniana ny fiakaran’ny vidim-piainana. Ohatra ny vary sy ny solika. Eo koa ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana… Sambany handray izany fifanatrehana izany ny filoha vaovaon’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo.
Hitondra ny anjara birikiny koa ny Amerikanina. Hanohana antsika amin’ny fanomanana ny fifidianana i Etazonia. Hatao ny zoma izao eny amin’ny foiben’ny Ceni, Alarobia ny fifanaovan-tsonia amin’ny vola harotsak’izy ireo eo anivon’ny tahiry ho an’ny fifidianana (basket fund), amin’ny tetikasa Sacem. Tsiahivina fa tsy te hahalala afa-tsy fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka izy ireo, miaraka amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Hanomboka, ny 8 janoary ny fandraisana ny taratasin’ireo mpanao gazety, tokony hahazo ny karatra maha matihanina eo amin’ity asa ity. Hifarana ny 5 febroary ny fandraisana izany antontan-taratasy izany. Hivoaka ny 12 marsa kosa ny lisitr’ireo tokony hahazo ny karatra. Na izany aza, mbola afaka mametraka fitarainana ireo mety tsy mbola voasoratra ao anaty lisitra amin’reo fotoana ireo.